Soo dejisan HDD Regenerator 2011 – Vessoft
WindowsNidaamkaDisks adagHDD Regenerator
Bogga rasmiga ah: HDD Regenerator
HDD Regenerator – utility anfacaya u soo kabashada drive adag. Software la shaqeeyaa nidaam file kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad si scan drives adag ee dhaawac ama qalad. HDD Regenerator ku jira geynta gaar ah oo ka mid ah calaamadaha joogtada ah ee heerka hoose iyo kuwiinna sare, in la beddelo dusha gaareen ee drive ee adag. Software ayaa dib u soo celiso qeybaha dhaawacan badashi aan saameynta ay ku leeyihiin faylasha, in ku kaydsan yihiin computer user a. HDD Regenerator sidoo kale waxaa ku jira qaybo si loo abuuro flash drive waxaad computerka gelisaa CD ama DVD ah iyo.
Sawirro drive adag tahay khasaaraha iyo khaladaadka
Ogaanshaha of dhaawac jirka dushiisa disk ah
Taageerada nidaamka file kala duwan
Waxay abuurtaa sidayaal computerka
Soo dejisan HDD Regenerator
Faallo ku saabsan HDD Regenerator
HDD Regenerator Xirfadaha la xiriira